‘बिट्वीन लाइन्स एन्ड लेयर्स’ कलाचित्र प्रदर्शनी गत चैत २९ गतेदेखि सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा सुरु भएको प्रदर्शनी यही वैशाख २९ गतेसम्म जारी रहने छ ।
गोकर्णमा मध्यरातमा सुरु भयो मानदेवकालीन कान्तिभैरव जात्रा चतुर्दशीका दिन आफ्नो टोल र छरछिमेक सफाइ गरेपछि मध्यरातदेखि वैशाख शुक्ल तृतीयाअर्थात् अक्षय तृतीयाका दिनसम्म कान्तिभैरवको मुख्य जात्रा लाग्छ ।
पल शाहका दुवै निवेदन एकसाथ पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश उच्च अदालत पोखराले बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पूर्णविक्रम शाह पलले दर्ता गरेका दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन एकसाथ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
डा. लोप्चनको 'गाइने दाइको सारंगी' गीतिसंग्रह विमोचन काठमाडौं । डा.लोकबहादुर लोप्चनबाट लिखित १०१ वटा गीतहरू समेटिएको 'गाइने दाइको सारंगी'मा गीतिसंग्रह विमोचन गरिएको छ । तामाङ राष्ट्रिय पुस्तकालयमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा जापानका पूर्वराजदूत डा.गणेश योञ्जनले विमोचन गर्नुभएको हो । कार्यक्रम तामाङ राष्ट्रिय पुस्तकालयका अध्यक्ष अमृत योञ्जनको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट चलचित्र पुरस्कार प्रदान काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न कलाकार र स्रष्टाहरूलाई आज राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार, विशेष चलचित्र तथा दीर्घ साधना सम्मान प्रदान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले चलचित्र विकास बोर्डले आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजना गरेको समारोहमा ती पुरस्कार र सम्मान वितरण गर्नुभएको हो ।
मिलन डिजी इन्टरनेशनल प्रालिद्वारा जिफानको नयाँ कार्यसमितिलाई बधाई तथा सम्मान पोखरा । मिलन डिजी इन्टरनेशनल प्रालिले सातौं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित गुरुङ फिल्म एशोसिएसन नेपाल (जिफान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा सम्मान गरेको छ । नव वर्ष २०७९ आगमनमा अवसरमा शुभकामनासहित मिलन फाउण्डेशन नेपाल, मिलन वर्ल्ड डट न्युज र मिलन ट्रष्ट सहआयोजक रहेको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि तमुधिं नेपालका अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङ र मिलन डिजी इन्टरनेशलन प्रालिकी संरक्षक सावित्री गुरुङले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
नेपालको कला विश्वकै चिनारी : उपराष्ट्रपति रासस,काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाली कला विश्व कै चिनारी भएको बताउनुभएको छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी, २०७९’ को उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र कलाले समृद्ध रहेकाले विश्वकै लागि पहिचान भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय विभूति अरनिकोदेखिका कलाकारले कलाका माध्यमबाट विश्वमा नेपालको शिर उँचो बनाउने काम गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
गायक लामा र अभिनेत्री पुन सगरमाथा आरोहण गर्नुहुर्दै काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि जान लागेका मङ्गोलिन हार्टका गाएक राजु लामा र अभिनेत्री दिया पुनलाई सोमबार बिदाइ गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा मन्त्री आलेले लामा र पुनलाई नेपालको राष्ट्रिय झन्डा प्रदान गरेर बिदाइ तथा आरोहणको शुभकामना दिनुभएको हो ।
पर्या लेखक हितानको कृति‘ब्लु प्लानेट’ माथि परिचर्चा कास्की । पोखरामा पर्या लेखक विजय हितानको कृति ‘ब्लु प्लानेट’ माथि परिचर्चा गरिएको छ । जरोटुप्पो संरक्षण साहित्य समाज नेपालको आयोजनामा पोखरा थियटरमा हितानको कृतिमाथि विमर्श गरिएको हो । ‘ब्लु प्लानेट’माथि प्राध्यापक कल्याण पन्तले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यो हितानको वातावरणीय मुद्दामा केन्द्रित दोस्रो कथाकृति हो ।
बौद्ध साहित्य प्रज्ञा पारमिताको नेपाली अनुवाद विमोचन बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र धर्मग्रन्थ अष्टसहर्षिका प्रज्ञा पारमिताको नेपाली अनुवाद बुधबार विमोचन गरिएको छ । बौद्धवचन अनुवाद समितिले ३२ खण्डमा विभाजित कृति भोट भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको छ ।
‘पीर’बाट लडाकु देहव्यापारमा संलग्न दृश्य हटाइयो काठमाडौं । चौतर्फी आलोचना भएपछि गायक प्रकाश सपुतले ‘पीर’ गीतबाट महिला लडाकु देहव्यापारमा संलग्न भएको दृश्य हटाउनुभएको छ । उहाँले शनिबार साँझ उक्त दृश्य हटाइएको गीतको नयाँ भिडियो युट्युबमा अपलोड गर्नुभएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालको महाधिवेशनमा एघार पत्रकार सम्मानित पोखरा । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रेस चौतारी पत्रकारिता पुरस्कारबाट विभिन्न ११ जनालाई सम्मान गर्नुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपालको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको शुक्रबार पोखरा सभागृहमा भएको उद्घाटन समारोहमा उहाँले नगदसहित दोसल्ला र सम्मानपत्रले सम्मान गर्नुभएको हो ।
पल-समीक्षा प्रकरणमा पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन नगर्न आयोगको आग्रह काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पल शाह प्रकरणमा पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन गर्ने, अभिव्यक्ति दिने र प्रचारबाजी गर्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको बेला यस प्रकारका गतिविधिले आरोपित र पीडित दुवै पक्षको गोपनीयता र मर्यादामा आँच पुग्नुका साथै अनुसन्धान प्रक्रिया समेत प्रभावित हुनसक्ने आयोगले जनाएको छ ।
बेलायतवासी साहित्यकार हितानको 'मगर रिन्हाक' शुक्रबार विमोचन हुने काठमाडौं । बेलायतवासी साहित्यकार विजय हितानद्वारा लिखित 'मगर रिन्हाक' पुस्तक आउँदो शुक्रबार काठमाडौंमा विमोचन हुने भएको छ । यही फागुन २० गते शुक्रबार दिउँसो २:४५ बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लेखनाथ प्रवचन कक्षमा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम राखिएको लेखक एवं साहित्यकार हितानले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यक्रममा मगर र गैरमगरहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको छ ।
नायक पल शाह तनहुँ प्रहरीको नियन्त्रणमा तनहुँ । जबर्जस्ती करणीको अभियोग लागेका नायक पल शाह पक्राउ परेका छन् । आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उपस्थित भएपछि प्रहरीले शाहलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले शाहलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा ४० भाषाका ४६ कवि एवं कवयित्री काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव २०७८ मा ४० भाषाका ४६ कवि एव कवयित्रीले कविता वाचन गरेका छन् ।
साहित्यकार ताना शर्माको निधन काठमाडौं । वरिष्ठ साहित्यकार तारानाथ शर्माको ८७ वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ । उहाँ ताना शर्माका नामशबाट लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो । विसं १९९१ असार ९ गते इलामको बरबोटमा जन्मनुभएका उहाँले ‘झर्राेवादी आन्दोलन’का एक अगुवा हुनाका साथै नियात्रा, निबन्ध, कथा, उपन्यास, समालोचनालगायत विधामा दर्जनौँ कृति लेख्नुभएको छ ।
बेलायतवासी तमुको मौलिक गीत 'रोधीघर आँगन-३' सार्वजनिक [भिडियो] लन्डन । बेलायतवासी सञ्चारकर्मी एवं भूपू ब्रिटिस गोर्खा आर्मी मिलन तमुको शब्द रचनामा रहेको मौलिक गीत 'रोधीघर आँगन-३' सार्वजनिक भएको छ । शनिबार अर्चुअल माध्यम आयोजित कार्यक्रममा उक्त गीत 'आरके गुरुङ युट्युब च्यानल'मार्फत लोकार्पण गरिएको हो । तमुले यो गीतलाई आमा स्व. दिलकुमारी गुरुङप्रति समर्पित गर्नुभएको छ ।
लामाको अध्यक्षतामा नृत्य निर्देशक संघ तार्केश्वर कमिटी गठन काठमाडौं । नृत्य निर्देशक संघ नेपाल तार्केश्वर नगर कमिटी गठन भएको छ । तार्केश्वरस्थित रि एण्ड कि फिल्मस् प्रालिको सभाहल शनिबार आयोजित कार्यक्रममा टेकबहादुर लामाको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको हो ।
तामाङ मातृभाषा कविता प्रतियोगितामा काभ्रेकी हिरामाया उत्कृष्ट पोखरा । कोकोम्हेन्दो साहित्य समाज पोखराले आयोजना गरेको प्रथम तामाङ मातृभाषा खुला (व्हाईखा) कविता प्रतियोगिताको उपाधि हिरामायाको ‘योना हाउले होई’ (छिटो आउनु है) ले जितेको छ ।
चर्चित मोडल रन्जितालाई अमेरिकामा गुरुङ कलाकारको स्वागत न्यूयोर्क । लोक तथा दोहोरी गीत क्षेत्रकी चर्चित मोडल एवं नायिका रन्जिता गुरुङलाई अमेरिकामा भव्य स्वागत गरिएको छ ।
प्रेम गुरुङको म्युजिक भिडियो 'नीउरी गाउँ' विमोचित [भिडियो] लमजुङ । सर्जक तथा लेखक प्रेम गुरुङको शब्द रचना रहेको म्युजिक भिडियो 'नीउरी गाउँ' विमोचन गरिएको छ । अमर युवा क्लबले लमजुङ मर्स्याङ्दी गाउँपालिका ५ मा अवस्थित सयपत्री आमा समूहको भवन नीउरीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा 'घर त मेरो नीउरी'का सर्जक प्रमुख अतिथि प्रेम गुरुङले म्युजिक भिडियो विमोचन गर्नुभएको हो ।
जम्बो जेटमा बाबाको पहिलो विदेशयात्रा नेपाल आर्मीमा हुनेहरू सबै एकपल्ट शान्ति सेना जान चाहन्थे, मेरो बाबाले पनि कोसिस गरेको निकै भइसकेको थियो | माथिल्लो दर्जामा आफ्नो मान्छे हुने अथवा जसले मोलमाल गर्न जान्दछ । उनीहरूको नाम छिट्टो निस्कँन्थ्यो, मेरो बाबा सोझो लिम्बु, दायाँबायाँ केही गर्न नजान्ने र ठूलो पदमा आफ्नो मान्छे पनि नभएकोले जहिल्यै फालिनुपर्थ्यो |
सुई देवकुमार तामाङको ‘बासडोल नाम्सा’ सार्वजनिक काठमाडौं । गायक एवं सुई देवकुमार तामाङको स्वरमा ‘बासडोल नाम्सा’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सोमबार युट्युबबाट सार्वजनिक भएको गीतको शब्द राजकुमार दोङ तामाङ र सङ्गीत संयोजन र संगीत बुद्ध स्याङ्बाको रहेको छ । बरिस्ठ गायिका इन्दिरा गोलेले तामाङलाई स्वरमा साथ दिनुभएको छ ।
‘भरिया दाइ’का लोकगायक खत्री सक्रिय राजनीतिमा बागलुङ । लोकगायक विष्णु खत्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) गलकोट नगर समितिका उपाध्यक्षमा चयन हुनुभएको छ । बुधबार बसेको नगर समितिको पहिलो बैठकले उहाँसहित सात सदस्यीय पदाधिकारी चुयन गरेको हो । गायक खत्रीले विकास र सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान दिन सक्रिय राजनीति रोजेको बताउनुभयो ।
गायिका घिसिङको ‘शिरफूल’ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक काठमाडौं । गायिका निर्मला घिसिङको ‘शिरफूल’ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतमा बरिस्ठ गायक एवम् संगीतकार चन्द्रकुमार दोङको संगीत, पद्म मोक्तानको शब्द रहेको छ । गीतको भिडियोमा मोडल रोहनी लामा र नरेन मोक्तानको अभिनय रहेको छ भने भिडियोको निर्देशन अजय स्याङतान र छायाङ्कन बिक्रम मोक्तानले गर्नुभएको हो ।
अमेरिकावासी निलमकुमारको ‘जिन्दगीको आधा यात्रा’ सार्वजनिक काठमाडौं । अमेरिकाको बाल्टिमोर निवासी गीतकार निलमकुमार थापा मगरले सत्य घटनामा आधारित म्यूजिक भिडियो ‘जिन्दगीको आधा यात्रा’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
कहिल्यै नफाट्ने माया... ‘तिमीलाई नै’ आकाश खसोस, धर्ती फाटोस् घाम रोकियोस् चाहे जुन रोकियोस् तर हाम्रो माया...कहिलै नफाटोस्...